5 Talo Waa inaad taqaanaa About YouTube 4k Video
Halkan, waxaad ku baran doontaa ka tago iyo mooraal ah YouTube 4k video. Fahamka sida video 4k iyo YouTube lihin waa muhiim, gaar ahaan haddii aad tahay ganacsi video-qaadashada. Xitaa haddii aad bilaabayso dhamaystiran, eegno sida loo isticmaalo YouTube 4k video maqaal hoose iyo sida ay wax ka beddeli kartaa waayo-aragnimo YouTube.
Haddii aad rabto in aad geliyaan video ah 4k in YouTube ama video ah 4k si uu u daawado meel kasta wakhti kasta, waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo in qodobka hoos ku qoran. Inkastoo YouTube video 4k waa feature iskula in YouTube ayaa ku daray, weli waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah la dhaafi karin in ay isticmaalka, iyo waxaan dulmar doonaa kuwa hoos ku qoran.
Waa maxay YouTube 4k video?
Shuruudaha YouTube 4k video
Sida loo geliyaan 4k videos in YouTube
Sida loo soo bixi YouTube 4k videos
Maxaad web browser saameyn karta guusha 4k
4k xal waa marka bandhigay ugu yaraan 4,000 oo pixels ballaaran, oo ah shir sanadeedkii guud ahaan sideed milyan oo pixels. Waxaa badanaa loo yaqaan "HD aalladda" sababtoo ah waa dhab ahaan waxa ay tahay, oo aad la siinayo dheeraad ah oo tayo sare leh, cajiib videos.
4k ayaa kala guurka fantastik ah dunida YouTube ee intaa dheer in TV-ga iyo filimada. Ka dib markii ay tijaabinayaan xal cusub ka dib 2010, YouTube ayaa ugu danbeyn go'aansaday in ay bilaabaan dib loo awood u leh inay ku darto 4k videos in website-ka. Oo dhan videos ma laga heli karaa xal sare sida, laakiin qaar badan oo ka lagu daray maalin kasta. Ka hor inta aadan u ogaado, 4k noqon doonaa heerka ugu YouTube videos-haddii shirkadda sii joogo wadada.
Iyadoo warshadaha YouTube sii si ay u koraan, sida xaqiiqada ah waxaa jiri doona waafaqsan in badan la qaabab iyo hardware website ay u baahan tahay si aad u geliyaan iyo u arkaan, kuwaas oo aalladda videos HD.
Isbeddelladan horay loo arki karaa formatting cusub VP9 oo uu soo daray videos (sii hoos ku qeexan) si celcelis ahaan internet user uma baahna bandwidth weyn (ka baxsan xuduudda wi-fi bixiyaha celcelis ahaan ama adeegga taleefanka ee) in ay geliyaan ama aragti Qaraarka videos 4k.
Sababtoo ah habkaani waa si cusub, waxaa jira xad ay taas videos yeelan karaan ikhtiyaarka xal 4k. First of dhan, geeyo 4k u baahan yahay wax badan oo bandwidth. Haddii network ayaa bandwidth yar, ka dibna 4k ma u badan tahay ciyaari doonaa qalab aad. Sidoo kale, dadka isticmaala waa in ay haystaan ​​qalabka saxda ah si aad u eegto videos ah; Si kastaba ha ahaatee, videos ayaa hadda lagu adeegi jiray ilaa qaab codec VP9 cusub ka dhigi karta shuruudaha bandwidth yar culus.
Xadeynta Qaar ka mid ah kaas oo daalacashada waxaad isticmaali kartaa marka uploading ama daawashada 4k videos waxaa lagu xusay dheeraad ah oo qoraalkan sidoo. Sidii hore u soo sheegnay, shirkadda YouTube sii si ay u koraan iyo innovate, shuruudaha iyo xadka ka 4k videos u badan tahay in ugu dhakhsaha badan la yareeyo ama go'an, gaar ahaan la qaatao uga dhow 4k video downloads sanadihii la soo dhaafay.
Nasiib darro, xitaa haddii aad la kulanto shuruudahan, si kastaba ha ahaatee, aad video 4k probaby xafidi doonaa wax badan.
Haddii aad qabto video ah 4k in aad jeclaan lahayd inaad geliyaan si ay u YouTube, waa mid fudud. The foomam loogu talagalay YouTube Uploaded Videos yihiin, inta badan, 720p ama 1080p. Sidaas darteed, uploading 4k videos aad u baahan tahay in ay la video xal 4k horeba ka hor habka Upload ah. Si kale haddii loo dhigo, YouTube aan u bedeli karaan video ka galay 4k ahaantiisa.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin uploading aad 4k videos in YouTube si ay u tahay qof walba heli karo si uu u daawado in this xal sare:
First of dhan, aad video dhoofinta video editor dhamaadka more sare ah, sida Adobe jilitaankii, yaabaa in loo baahdo, tan iyo markii ugu free video tifaftirayaasha ma qaado ikhtiyaarka ee qaraarka 4k. Edit size jir ah (in pixels) ku jirta qeybta Dejinta Ciyaar (iyo tafatirayaasha kale) ka, sida ku cad image hoose.
Mararka qaarkood, fps ah (loox kasta labaad) ee video xadidi karaa helitaanka xal 4k on YouTube. Haddii aad uploaded video ah 60fps oo aan shaqeyn, isku day inaad u beddelaya 30fps oo laga yaabaa in aad guul ka badan. (Waxaad ku samayn kartaa sida aan ka arki kor ku xusan oo hoos Screenshot).
Kale ee ka badan shuruudahaas, si fudud u helaan YouTube channel iyo geliyaan aad video 4k sida aad caadi ahaan lahaa wax kale video. Ka dib marka aad sidaa samaysay, ikhtiyaarka u 2160p (4k) xal la heli karo ee hoos icon marsho in video ah waa in.
Haddii aad rabto in aad la kulanto, kuwaas oo 4k videos, iyaga duuban yahay neecaw. Raac tallaabooyinka hoose:
1. Tag http://www.wondershare.com/tunesgo iyo isku dayi (ama ka iibsan) Wondershare TunesGo (for Windows ama Mac!).
2. heshid codsiga ka dib markii aan u rakiban.
3. Dooro ikhtiyaarka download in bar lefthand ah.
4. Gali URL ee video YouTube aad dooneyso in aad kala soo bixi.
5. Riix badhanka download cagaaran. Hadda waxaad heli kartaa video in MP3 (audio) ama MP4 (video) qaab, waxayna ku xiran tahay oo aad dooratay in aad rabtid.
Mid ka mid ah khasaaro si kartida 4k YouTube ee waa in waxa kaliya ee suurto gal ah in geliyaan 4k YouTube videos at 60fps on Google Chrome. Lahaanshaha 60fps on Safari suurtogal ma aha. Tani waxay u muuqataa arin iska sahlan (kaliya download Chrome iyo u isticmaalaan si aad u tafatirka YouTube), laakiin waxa ay u muuqan kartaa in ay noqon arrin ka xanibayo. Maxaad ma aha Doorashadan laga heli karaa Safari?
Waa hagaag, dad badan ayaa la dhibaatooday arrintan, oo kuwanuna waxay u muuqataa in ay xal u san yahay. CUSBOONAYSIINTA in nooca ugu dambeeya ee Safari iyo OS X Yosemite kaa caawin kara inaad eegto iyo geliyaan videos kuwan. Haddii kale, waxaad dhibta karaa iyadoo la tirtirayo khasnado aad Safari browser ama deselecting "ogolow fur-tago" aad door bidayso page. Haddii mid ka mid ahaa tan sameeyaan caawisaa, degsado Chrome (waa fudud oo degdeg-kaliya Google "Download Chrome u Mac"). Sida xaqiiqada ah, in labada shirkadood, Safari iyo YouTube, ka shaqaynaynaa si loo xaliyo arrintan si loo hagaajiyo nolasha aad video-aragnimo.
Desktop kasoo horjeeddo Online AVI Converter
> Resource > Video > 5 talooyin aad qabto in aad ka ogaato youtube 4k video